Ungaluqhuba kanjani uvivinyo lwe-A / B ekhasini lakho lokufika | Martech Zone
Ungaluqhuba kanjani uvivinyo lwe-A / B ekhasini lakho lokufika
Lwesibili, Disemba 16, 2014 Lwesibili, Disemba 16, 2014 Douglas Karr
ILander yipulatifomu yekhasi lokufika elingabizi elinokuhlolwa okuqinile kwe-A / B okutholakala kubasebenzisi ukukhuphula amazinga akho wokuguqulwa. Ukuhlolwa kwe-A / B kuyaqhubeka nokuba yindlela eqinisekisiwe abasetshenzisi bezikhangiso abayisebenzisayo ukukhama ukuguqulwa okwengeziwe kusuka kuthrafikhi ekhona - indlela enhle yokuthola ibhizinisi eliningi ngaphandle kokuchitha imali eningi!
Kuyini Ukuhlolwa kwe-A / B noma Ukuhlukaniswa Kokuhlukaniswa
Ukuhlolwa kwe-A / B noma ukuhlukaniswa kokuhlolwa kunjengoba kuzwakala, ukuzama lapho uvivinya izinhlobo ezimbili ezihlukile zekhasi lokufika ngasikhathi sinye. Ngokuyisisekelo akukho lutho ngaphandle kokusetshenziswa kwendlela yesayensi emizamweni yakho yokuthengisa online.
Ukhiye owodwa wokuqinisekisa ukuthi unedatha edingekayo yokuxhasa imiphumela ukukala ivolumu yezivakashi nokuguqulwa, futhi kubalwa ukuthi ngabe sikhona yini isiqinisekiso sezibalo esivivinyweni. Ama-KISS Metrics ahlinzeka nge-primer enhle Ukuhlola Kwe-A / B Kusebenza Kanjani kanye nethuluzi le- ukubala ukubaluleka yemiphumela.
Kuma-infographic abo wokuhlola we-A / B asebenzisanayo, abakwaLanders bahamba ngokuhlola ngempumelelo ikhasi labo lokufika futhi banikeze nokubikwa ngomphumela:
Njalo hlola into eyodwa esivivinyweni ngasinye njengokuhlelwa, isihloko, isihloko esincane, ukubizelwa esenzweni, imibala, ubufakazi, izithombe, amavidiyo, ubude, ukwakheka nezinhlobo ezahlukahlukene zokuqukethwe.
Khetha ongakuhlola futhi uthuthukise izinhlobo ezahlukahlukene ngokuya ngokuziphatha kwakho komsebenzisi, izindlela ezinhle kakhulu, nolunye ucwaningo Khumbula, kufanele kusetshenziswe into eyodwa kuphela futhi kuhlolwe.
Qalisa isivivinyo isikhathi eside ngokwanele ukuthola isiqinisekiso sezibalo semiphumela, kodwa qiniseka ukuthi uqeda isivivinyo bese ubeka inguqulo yakho ewinayo bukhoma ngokushesha okukhulu ukukhulisa ukuguqulwa.
Ngethuluzi likaLander, ungakha futhi uvivinye izinguqulo ezintathu ezihlukene zekhasi ngalinye lokufika ngasikhathi sinye. Lokho kusho ukuthi uzokwazi ukudala izinhlobo ezahlukahlukene zekhasi lakho lokufika ngaphansi kwe-URL efanayo.
Tags: ukuhlolwa kwe-abumgibeliukuhlolwa kwekhasi lokufikaukuhlolwa kwekhasi lokufikaisivivinyo sokuhlukanisa
Isisekelo Secebo Eliphumelelayo Lokuthengisa Komphakathi
I-VB Insight: Abahlaziyi futhi Ababizi, Imibiko Yangempela Yomhlaba
Mar 6, 2015 ku-2: 25 PM
Sawubona Douglas! Siyabonga ngokuchaza ukuthi ungaqhuba kanjani i-AB Test ye-Landing Page usebenzisa iLander. Incazelo enhle nezeluleko eziwusizo! Simema abafundi bakho ukuthi bazame isilingo sethu samahhala sezinsuku ezingama-30 futhi basebenzise amakhasi abo okufika. Ozithobayo!